Hubkii oo dhan ee Ilaah, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Maanta, Kirismaska, waxaan ula macaamilaynaa “hubka Ilaah” warqaddii ay u qortay Efesos. Waad la yaabi doontaa sida tani ay ula xiriirto Ciise Badbaadiyeheenna. Bawlos warqaddan wuxuu ku qoray xabsi ku yaal Rome. Wuxuu ka warqabay daciifnimadiisa wuxuuna isku halleeyey ciise.
Ugu dambayn, ku xoogaysta Rabbiga iyo xoogga itaalkiisa. Ku dheji hubka Ilaah, si aad ugu adkaysan kartaan weerarada Ibliiska ee Ibliiska "(Efesos 6,10: 11-XNUMX).
Hubkii Ilaah waa Ciise Masiix. Bawlos wuxuu soo jiitay iyaga sidaa darteedna Ciise. Wuxuu ogaa inuusan shaydaanka keligiis ku guuleysan karin. Isaguna qasab kuma aha inuu taas sameeyo, maxaa yeelay Ciise wuxuu horay uga adkaaday sheydaan isaga.
Laakiin maxaa yeelay carruurtan oo dhan waxay leeyihiin hilib iyo xayawaan dhiig, isagu sidoo kale wuxuu noqday hilib iyo nin dhiig. Qaabkan ayuu ku canaanan karaa kuwa awoodaha leh oo adeegsada dhimashada, oo ah Ibliiska "(Cibraaniyada 2,14:XNUMX NG).
Ciise wuxuu inoo noqday sidii nin oo kale, dembiga mooyaane. Waxaan u dabaaldegnaa Dhalashada Ciise Masiix sannad kasta. Noloshiisa wuxuu la diriray halgankii ugu adkaa abid. Ciise wuxuu diyaar u ahaa inuu kugu dhinto aniga iyo aniga halgankaan. Badbaadiyuhu wuxuu umuuqday inuu guuleystay! "Waa maxay guul," Ibliisku wuxuu ku fikiray markuu arkay Ciise inuu iskutallaabta ku dhintay. Waa maxay guuldaradii guud ee isaga markii uu ogaaday sarakiciddii Ciise Masiix ka dib in Ciise oo dhan xoogiisii ​​ka qaaday.
Qaybta koowaad ee hubka
Qaybta koowaad ee hubka Ilaah wuxuu ka kooban yahay Runta, caddaaladda, nabadda iyo iimaanka, Adiga iyo anigu waxaan gashadeen difaacan Ciise waxaana u istaagi karnaa weerarada khiyaanada ee sheydaanka. Ciise waxaan isaga difaacnaa oo aan difaacnaa nolosha Ciise ina siiyay. Waxaan haddaba si gaar ah u eegnaa tan.
"Haddabse waa hubaal, in dhabnimada dhexda lagu xidho run" (Efesos 6,14:XNUMX).
Suunkayagu wuxuu ka kooban yahay run. Waa ayo runtiina? Ciise wuxuu yidhi "Aniga ayaa run ah!"(Yooxanaa 14,6: XNUMX). Bawlos wuxuu ka yidhi naftiisa:
"Sidaas darteed anigu ma sii noolaado, laakiin Masiix ayaa igu dhex nool!" (Galatiya 2,20:XNUMX HFA).
Runta ayaa kugu dhex jirta waxayna muujineysaa qofka aad ku jirtid ciise. Ciise wuxuu kuu muujiyaa runta adiga wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad aragto daciifnimadaada. Waxaad dareentaa khaladaadkaaga. La'aantiis Masiixa waxaad noqon lahayd dembilaawayaal lumay. Iyagu ma haystaan ​​wanaag ay ku muujiyaan Ilaah kaligood. Dembiyadiinna oo dhanna isaga wuu yiqiin isaga. Isagu wuxuu u dhintay adiga markii aad dembilaha ahayd. Taasi waa hal dhinac oo runta ah. Dhinac kale waa kan: Ciise wuu kugu jecel yahay gogol kasta iyo xarago.
Asalka runta waa jacayl ka yimid xagga Ilaah!
"Lagu dhammeeyay taangiga caddaaladda" (Efesos 6,14:XNUMX).
Laabtayadu waa xaqnimada uu Ilaahay siiyay Masiixu dhimashadiisa.
“Rabitaankeyga aad ayaan u jeclahay in lala xiriiro isaga (Ciise). Taasi waa sababta aan markaa dambe u rabin inaan wax ka ogaado caddaaladda ku saleysan sharciga oo aan ku helo dadaalkayga. Hase yeeshe, waxaan ka walaacsanahay xaqnimada laygu siiyay rumaysadka Masiixa - xaqnimada xagga Ilaah ka timaada oo ku saleysan iimaan ”(Filiboy 3,9 (GNÜ)).
Masiixu wuxuu idinku dhex jiraa xaqnimadiisa. Waxaad ku heshay xaqnimada rabbaaniga ah xagga Ciise Masiix. Xaqnimadiisa waad ku difaacan tahay. Ku farax Masiixa. Wuxuu ka adkaaday dembiga, dunida iyo dhimashada. Ilaah wuxuu bilowgiiba ogaa inaadan keligaa qaban karin. Ciise wuxuu qaatay ciqaabta dhimashada. Dhiiggiisii ​​ayuu ku bixiyay dhammaan deymihii lagu lahaa. Iyagu xaq bay ku yihiin carshiga Ilaah hortiisa; Waxaad soo jiidatay Masiixa. Caddaaladdiisu waxay kaa dhigeysaa mid daahir ah oo xoog badan.
Caddaaladda caddaaladdu waa jacayl ka yimaadda xagga Ilaah!
Farriinta kabaha nabadda
"Cagahaaga cagahoodow, oo diyaar u ah inaad u istaagto injiilka nabadda" (Efesos 6,14:XNUMX).
Aragtida Ilaah ee adduunka oo dhan waa nabaddiisa! Qiyaastii laba kun oo sano kahor, markii Ciise dhashay, farriintan waxaa ku dhawaaqay malaa'igo fara badan oo leh: "Ammaan iyo ammaan waxaa leh Ilaaha ugu sarreeya, nabadna ha u ahaato dadka ammaantiisa." Ciise, Amiirka Nabadda, wuxuu nabdoon ku keenaa meel kasta oo uu tago.
“Waan kula hadlay si aad nabad igu dhex noolaato. Aduunka waad ka baqaysaa; laakiin kalsoonaada, waan ka adkaaday dunida ”(Yooxanaa 16,33:XNUMX).
Ciise wuu kugu dhex nooshahay nabaddiisa. Nabad ku noolow Masiix xagga iimaanka Masiixa. Iyaga waxaa qaada nabadiisa oo waxay u qaadaan nabadiisa dadka oo dhan.
Asalka nabaddu waa jacayl ka yimid xagga Ilaah!
"Wax walba oo kale, qaado gaashaanka rumaysadka" (Efesos 6,16:XNUMX).
Gaashaanka waxaa laga sameeyaa iimaan. Aaminaadda adagi waxay baabi'isaa dhammaan fallaadho dab ah oo xun.
"Inuu isagu xoog idin siiyo markii ay weynaantiisa ammaanta leh, oo aad isaga ku xoogaysataan ruuxiisa xagga gudaha, in Masiixu qalbiyadiinna ku noolaado rumaysad, oo aad jacayl ku xididdeen oo aad jacayl ku aasaasay" (Efesos 3,16: 17-XNUMX) ,
Masiixu qalbigaaga ayuu ku noolaa iimaankiisa. Waxaad ku leedihiin Ciise iyo jacaylkiisa. Rumaysadkoodu, wuxuu ku shaqeeyey Ruuxa Ilaah, wuxuuna baabi'iyaa fallaadho kasta oo dab leh oo shar ah.
Ma dooneynno inaan bidix ama midig u eegno, kaliya waxaan dooneynaa inaan eegno Ciise. Isagu wuxuu ina siiyay iimaan wuuna sii hayn doonaa ilaa aan gaarno yoolkeena. Sababta oo ah farxad weyn ayaa isaga sugaysay, Ciise wuxuu ku adkaystay dhimashadii iskutallaabta dusheeda ”(Cibraaniyada 12,2: XNUMX HFA).
Asalka iimaanku waa jacayl ka yimid xagga Ilaah!
Qaybtii labaad ee hubkii u diyaar garowga dagaalka
Bawlos wuxuu yidhi: "Dharka Ilaah oo dhan wada gasha."
"Sidaas darteed, qaado dhammaan hubka uu Ilaahay idiinku diyaariyey! Markaa markay maalintani imaanayso xoogagga xunxun, waxaad hubaysan tihiin oo waad istaagi kartaan. Si guul leh ayaad u dagaallami doontaa oo waad guuleysan doontaa inaad adiga guuleysato ”(Efesos 6,13:XNUMX GNÜ).
Koofiyadda iyo seefta ayaa ah labada qeybood ee ugu dambeeya ee qalab ee uu u baahan yahay Masiixi inuu qabto. Askariga Roomaanka ah wuxuu gashaa koofiyadda raaxada ee khatarta daran. Ugu dambayntiina, seeftiisii ​​buu qaatay, waa hubkiisii ​​kaliya ee weerarka ahayd.
Aynu nafteenna geliyo meelahii adkaa ee Bawlos. Falimaha Rasuullada ayaa si faahfaahsan u sheegaya isaga iyo dhacdooyinka ka dhacay Yeruusaalem, qabashadii ay ku kaceen kuwii reer Rome iyo xabsi dheer oo uu ku lahaa Kaysariya. Yuhuuddu aad bay u ashtakeeyeen. Bawlos wuxuu rafcaan u diray boqorka, waxaana la keenay Rome. Wuxuu ku jiraa xabsi wuxuuna sugayaa masuuliyada horteeda maxkamadda boqortooyada.
"Koofiyadaha badbaadada qaata" (Efesos 6,17:XNUMX).
Koofiyaddu waa rajo badbaadada. Bawlos wuxuu qoray:
Laakiin, innagoo ah carruurta maalintii, waxaannu jecel nahay inaan miyir qabno, oo rumaysta jacayl iyo jacayl u ah koofiyadda rajada badbaadada. Maxaa yeelay, Ilaah go'aansaday inaannu cadhoonno, laakiin inaannu helno badbaado xagga Rabbigeenna Ciise Masiix, kan inoo dhintay, in haddii aannu toosno ama aannu wada seexanno, isla wakhtigaas ayaynu la noolaan doonnaa. "1 ​​Tesaloniika 5,8: 10-XNUMX ,
Bawlos wuxuu si buuxda u ogaa inuusan rajo ka qabin badbaadada inuusan sii jiri doonin boqorka hortiisa. Cuntadani waxay ku saabsanayd nolosha iyo geerida.
Jacaylka Ilaah waa isha badbaadada.
"Seefta Ruuxa, oo ah erayga Ilaah" (Efesos 6,17:XNUMX).
Bawlos wuxuu sharraxayaa macnaha hubka Ilaah sida soo socota: "Seefta Ruuxa waa ereyga Ilaah". Ereyga Eebbe iyo Ruuxa Eebbe waa isku xirnaan la'aan. Ereyga Eebbe waa ruux ahaan loo waxyoodo. Waxaan fahmi karnaa oo ku dabaqi karnaa Erayga Eebbe caawinta Ruuxa Quduuska ah. Qeexitaankani sax ma yahay? Haa, markay tahay xagga barashada iyo akhrinta Baybalka.
Si kastaba ha noqotee, barashada iyo akhrinta Kitaabka Quduuska ah maahan hub laftiisa!
Waxaa cad in ay tahay seef in Ruuxa Quduuska ahi siinayo qofka rumaysta. Seefta Ruuxaani waxaa loo arkaa inuu yahay Ereyga Eebbe. Ereyga "eray" kama tarjumin "astaamaha", laakiin waxaa laga soo qaatay "rhema". Ereygan macnihiisu waa "ka yimid xagga Ilaah", "waxa Ilaah leeyahay" ama "muujinta Ilaah". Waxaan u dhigay sidan: "Ereyga loo waxyooday oo ku hadlay Ruuxa Quduuska ah". Ruuxa Ilaah wuxuu noo muujiyaa eray ama wuu sii nooleeyaa. Waxaa loogu dhawaaqaa oo leh saameyn. Waxaan ka akhrinay tarjumaadda iswaafajinta ee Baybalka
Seefta ruuxa, Taasi waa hadal Eebbeanigoo ku tukanaya ruux kasta tukasho iyo duco kasta ”(Galatiya 6,17: 18-XNUMX).
Seefta ruuxa waa erayga Ilaah!
Baybalku waa ereyga qoran ee Eebbe. Barashada iyaga waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosha Christian. Waxaan ka baranay tan tan yaa Eebbe yahay, wixii uu hore u qabtay iyo wuxuu sameyn doono mustaqbalka. Buug kastaa wuxuu leeyahay qoraa. Qoraa Kitaabka Quduuska ah waa Ilaah. Wiilkii Ilaah wuxuu u yimid dhulka inuu Shaydaanka tijaabiyo, si uu isaga caabbiyo oo sidaasuu dadka u badbaadiyo. Ciisena wuxuu u kaxeeyey cidlada xagga Ruuxa. Wuxuu soomanaa 40 maalmood oo gaajoonayay.
Markaasaa duufiyihii u yimid oo ku yidhi, Haddaad tahay Wiilka Ilaah, dheh, Dhagaxyadanu waxay noqdeen kibis. Laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi, Waa qoran tahay (Sharciga Kunoqoshadiisa 5: 8,3): "Dadku kuma noolaado kibis oo keliya, laakiin waa eray walba oo afka Ilaah ka soo baxa" (Matayo 4,3-4).
Halkan waxaan ku aragnaa sida Ciise u aqbalay eraygan Ruuxa Ilaah oo jawaab u ah Shayddaanka. Maahan mid ku saabsan qofka sida ugu fiican u soo qaadan kara Kitaabka Quduuska ah. No! Waa dhan amaba waxba. Shaydaanka ayaa su’aal galiyay awooda Ciise. Ciise kuma qasbana inuu xaq ka dhigto wiilkiisa Ibliiska hortiisa. Ciise wuxuu ka marag furay Ilaah ka dib baabtiiskiisa: "Kanu waa wiilkayga aan jeclahay, oo aan ku faraxsanahay".
Ereyga loo waxyooday oo lagu dhawaaqay Ruuxa Ilaah ee salaadda
Bawlos wuxuu ugu yeedhay Efesos inuu yiraahdo duco Ruuxa Ilaah dhiirrigeliyey.
"Mar kasta tukasho iyo duco ku barida Ruuxa, oo ku sii adkaysta tukasho oo dhan quduusiinta oo dhan" (Efesos 6,18:XNUMX GNÜ).
Erey ahaan "duco" iyo "duco" waxaan door bidaa "inaan Ilaah la hadlo". Waxaan had iyo goor Ilaah la hadlaa hadal iyo fikrado. Ku tukashada ruuxiga micnaheedu waa: "Waxaan eegaa Ilaah oo waxaan kahelaa wixii aan ka idhaahdo HIM oo waxaan qalbigiisa kagala hadlo xaalad. Waxay la hadlaysaa ilaahay oo uu waxyooday Ruuxa Ilaah. Waxaan ka qaybqaataa shaqada Ilaah, halkaas oo uu horeyba uga shaqeynayay. Bawlos wuxuu ku booriyay akhristayaashiisa inay la hadlaan Ilaah ma aha oo keliya quduusiinta oo dhan, laakiin gaar ahaan isaga.
Oo ii duceeya (Bawlos) in markaan furo afkayga in la ii siin doono sagxadda si aan u furo si furan oo aan ku muujiyo qarsoodiga Injiilka, oo ah malaa'igtii aan ku xidhnaa silsilad, inaan si qumman uga hadlo sida ay tahay inaan sameeyo. Efesos 6,19: 20-XNUMX).
Halkan Bawlos wuxuu weydiisanayaa caawimaada rumaystayaasha oo dhan howshiisa ugu muhiimsan. Qoraalkaan wuxuu adeegsanayaa "si cad oo run ah" iyo sida iska cad dhiirigelinta inuu la hadlo amiirka. Wuxuu ubaahanyahay ereyada saxda ah, hubka saxda ah inuu dhaho waxa Eebbe ku yidhi inuu dhaho. Tukashaduna waa hubkan. Waa xiriirka ka dhexeeya adiga iyo Ilaah. Aasaaska xiriir qoto dheer oo qoto dheer. Tukashadda Bawlos:
Aabbow, xoog iyaga siiya xooggaaga oo ay ruuxiisu ku siin karaan hodanka ammaantaada oo gudaha ku xooji. Iimaankooda, Ciise wuxuu ku nool yahay qalbiyadooda! Ha ku xidhnaayeen jacayl jacayl oo noloshooda ku dul dhisaan, iyaga iyo walaalahooda oo dhan, inay awoodaan inay fahmaan sida aan la qiyaasi karin oo ballaadhan, sida jacaylka Masiixu u weyn yahay, oo aan mala awaal ahayn. Aabe, ka buuxso sharaftaada oo dhan! Ilaahow, yaa noo sameyn kara wax aan ka badnayn oo aan wax ku weyddiisan karno ama aanraysan karno - aad buuna u weyn yahay xoogga inaga dhex shaqeeya - in Ilaah yahay kan ammaanta kiniisadda iyo Ciise Masiixba leh tan iyo qarniyada oo dhan daa'imisnimo oo dhan. Aamiin. ”(Efesos 3,17: 21-XNUMX
Ku hadlida ereyada Ilaah waa jacayl ka yimid xagga Ilaah!
Ugu dambeyntiina, waxaan idin kula wadaagayaa fikradahan soo socda:
Bawlos wuxuu runtii maskaxda ku haystay muuqaalka askariga Roomaanka ah markii uu warqad u qoray Efesos. Qore ahaan, wuxuu aad u yaqaannay waxsii sheegyada ku saabsan imaatinka Masiixa. Masiixa laftiisu wuxuu xidhnaa hubkan!
(Isagu) wuxuu arkay inuusan qofna ahayn oo wuu la yaabay inuusan cidna Ilaah barye ku baryeyn. Taasi waa sababta ay gacantiisu isaga u taageertay oo caddaaladdiisuna ay taageertay. Wuxuu dhexda ku xidhay caddaalad sidii taangiga oo kale, oo wuxuu xidhnaa koofiyadda badbaadada. Wuxuu isku xidhay aargudasho wuxuuna huwaday jaakad qiiro leh. Laakiinse reer Siyoon iyo reer Yacquub oo dembiyadooda ka soo noqda, wuxuu u soo helayaa badbaadiye. Markaas Sayidku eraygiisa wuu bixiyaa ”(Ishacyaah 59,16, 17-20 iyo XNUMX HFA).
Dadka Ilaah waxay filayeen Masiixa, la subkay. Wuxuu ku dhashay Beytlaxam, laakiinse duniduna ma ay aqoonsan isaga.
Wuxuu yimid gurigiisa qoyskiisuna ma aqbalin. Laakiin immisa ayuu soo dhoweeyey, wuxuu siiyey xoog ay carruurtii Ilaah ku dhalaan, kuwaasu waa kuwa magiciisa rumaysta (Yooxanaa 1,11: 12-XNUMX).
Hubka ugu muhiimsan halgankayagu xagga ruuxa waa Ciise, Erayga Eebbe oo ah Masiixa, Masiixa la subkay, Amiirka Nabadda, Badbaadiyaha, Badbaadiyahayaga.
Miyaad hore u taqaanaan isaga? Ma dooneysaa inaad isaga siiso saameyn dheeraad ah noloshaada? Ma haysaa wax su'aalo ah oo ku saabsan mowduucan? Hogaanka WKG Switzerland waxay ku faraxsan yihiin inay kuu adeegaan.
Ciise hadda dhexdeena ayuu ku caawiyaa, wuu ku caawiyaa, wuuna bogsadaa oo quduus buu kaa dhigaa, inaad diyaar u ahaato markuu kugu soo noqdo xoogga iyo ammaanta.